Ekemeke | January 2020
Page Ịgụ na PowerPoint
Ntinye ọnụ ọgụgụ bụ otu n'ime ngwaọrụ maka ịhazi usoro ihe. Mgbe nsogbu ndị a na-esere na nkwupụta, usoro ahụ na-esikwa ike ịkpọ oku. Ya mere, ọ dị mkpa ịnwe ike ịme nọmba ahụ n'ụzọ ziri ezi, n'ihi na enweghị ihe ọmụma banyere ụzọ aghụghọ ụfọdụ nwere ike imebi usoro ọrụ. Usoro nchịkọta Ịrụ ọrụ nchịkọta ọnụ ọgụgụ dị na ngosi ahụ abụghị ihe dị ala karịa nke ahụ na akwụkwọ Microsoft Office.
Gbanwee agba nke hyperlinks na PowerPoint
Nhazi ihe ngosi nke ihe omimi nwere nnukwu uru. Na mgbe mgbe, ndị ọrụ na-agbanwe ihe a na-eme ka agbakwunye agbakwunyere, wee dezie ha. N'ime usoro a, onye ọ bụla ga-akwa ụta ihu eziokwu ahụ bụ na ọ bụghị ihe niile na-etinye onwe ha n'ihe yiri ka ọ bụ ụzọ ezi uche dị na mgbanwe. Dịka ọmụmaatụ, nsogbu a na-agbanwe agba nke hyperlinks.
Ịmepụta eserese na PowerPoint
Ihe eji edeputa bu ihe bara uru na ihe omumu n'ime akwukwo obula. Ihe ị ga-ekwu gbasara ngosi. Ya mere, iji mepụta ngosi dị elu ma na-enye ihe ọmụma, ọ dị mkpa ka ị nwee ike ịmepụta ụdị ihe ndị a n'ụzọ ziri ezi. Gụọ kwa: Ịmepụta kaadị na MS Word Building Charts in Excel Ịmepụta Chart A eserese kere na PowerPoint na-eji dị ka faịlụ mgbasa ozi nwere ike gbanwere n'ụzọ ọ bụla n'oge ọ bụla.
Ihe ngosi PowerPoint na-egosipụta na PDF
Ọ bụghị mgbe niile ka usoro ngosi ngosi dị na PowerPoint na-emezu ihe niile achọrọ. Maka na ị ghaghị ịtụgharị na ụdị faịlụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịtụgharị nsụgharị PPT na PDF bụ ezigbo ewu ewu. Ekwesiri ighota nke a taa. Nyefee na PDF Ọchịchọ ịkwanye ihe ngosi na PDF nwere ike kpatara ọtụtụ ihe.
Na-agbanwe ma debe nzụlite na PowerPoint ngosi
Ọ na-esiri ike ịmepụta ihe ngosi na-echefu echefu, nke nwere ọkwa dị ọcha. Ọ dị mkpa itinye ọtụtụ ndị ọkachamara na-ege ntị ka ha ghara ihi ụra na usoro ngosi. Ma ọ bụ i nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe - mgbe niile, mepụta ndabere nkịtị. Nhọrọ maka ịgbanwe agbanwe A na-enwe ọtụtụ nhọrọ iji gbanwee ndabere nke ihe ngosi ahụ, na-enye gị ohere ime nke a na ngwaọrụ dị mfe ma dị mgbagwoju anya.
Nsụgharị PDF nke PowerPoint
Mgbe ụfọdụ ị ga-enweta akwụkwọ na usoro na-ezighị ezi. Ọ na-anọgide na-achọ ụzọ ị ga-esi gụọ faịlụ a, ma ọ bụ ịtụgharị ya n'ụdị ọzọ. Nke ahụ bụ naanị banyere ịtụle nhọrọ nke abụọ bụ ịkọkwu okwu. Karịsịa ma a bịa na faịlụ PDF ndị ọ dị mkpa ka a sụgharịa gaa na PowerPoint.
Na - arụ ọrụ na hyperlinks na PowerPoint
A naghị eji okwu ahụ eme ihe mgbe niile maka igosipụta mgbe ọkà okwu na-agụ okwu ahụ. N'ezie, akwụkwọ a nwere ike ịgbanwere ngwa ngwa. Ịmepụta hyperlinks bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa n'inweta ihe mgbaru ọsọ a. Leekwa: Otu esi tinye hyperlinks na MS Okwu Ihe kacha mkpa nke hyperlinks A hyperlink bụ ihe pụrụ iche na, mgbe ịpịrị mgbe ị na-elele, na-arụpụta ụfọdụ mmetụta.
N'enyeghị oke, mmadụ ole na ole maara otú e si hazie atụmatụ PowerPoint iji mepụta ngosi dị irè. Ọbụna nke na-enweghị ike iche n'echiche otú ngwa a ga-esi jiri ngwa ahụ dum mee ihe na nzube ebumnuche. Otu ihe atụ nke a bụ ihe e kere eke na PowerPoint.
Ihe ngosi PowerPoint nwere ike dị oké njọ. Ihe kacha mkpa bụ nchekwa nke akwụkwọ dị otú ahụ. Maka na o siri ike ịkọwa oké mmetụta nke mmetụta uche dabara na onye ọrụ mgbe mmemme ahụ amaliteghị na mberede. N'ezie, nke a bụ ihe na-adịghị mma, ma na ọnọdụ a onye ekwesịghị ịtụ ụjọ ma kwuo ụta.
Iwepụ Slide PowerPoint
Mgbe ị na-arụ ọrụ na ngosi, ihe na-agbanwe mgbe nile ka ụzọ nkwụsị njehie bụrụ ihe zuru ụwa ọnụ. Na ị ga-ehichapu ihe ọ bụla na slides niile. Ma, e nwere ọtụtụ nuances ndị a ga-atụle mgbe ha na-ehichapụ ibe nke ngosi ahụ, nke mere na enweghị ike ime. Usoro Nwepu Iji malite, ị ga-atụle ụzọ ndị bụ isi isi wepụ slides, mgbe ahụ i nwere ike ilekwasị anya na nuances nke usoro a.
Ịkwanye usoro ọ bụla dị mfe n'ihi na akpaaka na mmezigharị nke usoro. Otú ọ dị, nke a anaghị adabere na ntinye nke Microsoft Office. N'ebe a, a ghaghị ime nke a n'ụzọ doro anya na n'ụzọ doro anya. Na-akwadebe maka nrụnye Ozugbo ọ bara uru ikwu na enweghi ike ibudata ngwa MS PowerPoint dị iche.
Na-arụ ọrụ na slides na PowerPoint
Ọ bụghị n'ọnọdụ ọ bụla mkpọka nke ngosi - ihe ngosi - na ụdị isi ha na-eji onye ọrụ ahụ. Enwere otutu ihe kpatara ya. Na aha nke ịmepụta ngosi ngosi, ị gaghị emeli ihe na-adabaghị na iwu na iwu. Ya mere i kwesiri idezi slide. Nhazi nhọrọ The PowerPoint presentation nwere oke nhọrọ nke ngwaọrụ ndị ga-eme ka o kwe omume ka ọ gbanwee ọtụtụ akụkụ dị iche iche.
Mee PowerPoint Crossword
Ịmepụta ihe gbasara mmekọrịta na PowerPoint bụ ụzọ dị mma ma dị irè iji mee ka ngosi ahụ nwee mmasị na ihe ọhụrụ. Otu ihe atụ ga-abụ ihe mgbagwoju anya, nke onye ọ bụla maara site na mbipụta. Ịmepụta ihe yiri nke a na PowerPoint ga-agba ajirija, mana nsonaazụ bara uru.
Tinye egwu na ngosi PowerPoint
Nkwado ụda dị mkpa maka ihe ngosi ọ bụla. E nwere ọtụtụ puku nuances, ị ga-ekwukwa banyere ya ruo ọtụtụ awa na nkuzi dị iche iche. Dị ka akụkụ nke isiokwu ahụ, a ga-atụle ụzọ dị iche iche nke ịgbakwunye na ịhazi faịlụ ọdịyo gaa na PowerPoint na ụzọ isi nweta ọtụtụ n'ime ya.
Ọ bụghị n'ọnọdụ ọ bụla, ngosi bụ akwụkwọ edepụtara nanị na PowerPoint. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na maka ọrụ niile dị n'ụwa a, e nwere ihe ngwọta ọzọ na usoro ịkwadebe ihe ngosi abụghị ụdị. Ya mere, anyị nwere ike ịnye ndepụta dịgasị iche iche nke mmemme dị iche iche ebe okike nke ngosi nwere ike ọ bụghị naanị na ọ dị mma, kama ọ ka mma n'ụzọ ụfọdụ.
Igosipụta foto na PowerPoint
Ọ bụghị mgbe niile na-arụ ọrụ na ngosi na PowerPoint, ihe niile na-aga nke ọma. Nsogbu a na-atụghị anya ya nwere ike ime. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-esikarị ike ihu eziokwu ahụ bụ na foto a zọlitere na-acha ọcha, bụ nke na-ewute ya. Dịka ọmụmaatụ, na-ekpuchi ihe dị mkpa. N'okwu a, ịkwesịrị ịrụ ọrụ na nke a.
Esi eme ihe ngosi maka PowerPoint ngosi
Office suite na Microsoft bụ ezigbo ewu ewu. Ụmụ akwụkwọ dị mfe na ndị ọkà mmụta sayensị ọkachamara na-eji ngwaahịa dị ka Okwu, Excel na PowerPoint. N'ezie, a na-emepụta ngwaahịa ahụ maka ndị ọzọ na-eto eto ma ọ bụ karịa, n'ihi na ọ ga-esi ike nke ukwuu maka onye mbido iji ọbụna ọkara nke ọrụ ahụ, ọ bụghị iji kọwaa ya dum.
Mmetụta nke ederede ederede na PowerPoint
Ibe ihe osise na ederede bu ihe di mma nke ime ihe anya. Ọ ga-enwekwa mmasị na ngosi PowerPoint. Otú ọ dị, nke a anaghị adị mfe - ị ga - agbanye tinker ịgbakwunye mmetụta yiri ya na ederede ahụ. Nsogbu nke ịbanye foto n'ime ederede Site na ụfọdụ nsụgharị nke PowerPoint, windo maka ederede aghọwo "Mpaghara Ọdịnaya".
Wụnye Fonts maka Microsoft PowerPoint
Ị nwere ike ịmepụta ihe ngosi dịgasị iche na ọrụ ndị ọzọ yiri ya na ihe Microsoft PowerPoint a maara nke ọma. Ụdị ọrụ ndị a na-ejikarị ọtụtụ ụdị. Nchịkọta ọkọlọtọ arụnyere na ndabara adịghị adaba mgbe niile, ọ bụ ya mere ndị ọrụ ga-eji tinyekwuo fon.
Njikwa njirimara PowerPoint
Ọ naghị adị mfe mgbe nile iji gbanwee n'ụzọ dị ukwuu mgbe ị na-emepụta ngosi na PowerPoint. Ma ọ bụ iwu ahụ, ma ọ̄ bụ ọnọdụ ọ bụla ọzọ nwere ike idozi nhazi ikpeazụ nke akwụkwọ ahụ. Ma ọ bụrụ na ọ dịla njikere - ihe ị ga-eme? Anyị ga-arụ ọtụtụ ọrụ iwepụta ihe ngosi ahụ. Ibu oke nke ngosi O doro anya, ederede ederede na-enye akwụkwọ dị oke ka ọrụ Microsoft Office ọ bụla.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ekemeke 2020